Homeरोचक / विचित्रनिन्द्रा नपुग्नेलाई मानसिक समस्या ?
June 9, 2019 Spnews रोचक / विचित्र, स्वास्थ्य/विशेष Comments Off on निन्द्रा नपुग्नेलाई मानसिक समस्या ?
मानिसलाई स्वस्थ रहँदा खानपानसँगै आरामको पनि जरुरत पर्दछ । भविष्यको चिन्ताका कारण धेरैले कम सुत्ने र धेरै काम गर्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
तर, त्यस्तो काम स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य जर्नलले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार निन्द्रा नपुग्ने गरी सुत्ने मानिसमा मानसिक समस्या हुन सक्ने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । निद्रा पुग्नेगरी नसुत्ने कलेज तहका विद्यार्थीहरुको मानसिक विकासमा समस्या हुने खतरा रहेको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ ।
निद्रा पूरा नभएकाले मानसिक समस्या देखिएकामध्ये २१ प्रतिशतमा तनावको समस्या पाइएको छ । अध्ययन कर्ताले २४ प्रतिशतमा निराशाको समस्या हुने बताएका छन् । त्यस्तै २४ प्रतिशतमा रिसाउने समस्या, २५ प्रतिशतमा कुन्ठा, २५ प्रतिशतमा महत्वकांक्षा, २८ प्रतिशतमा काम गर्न समस्या र २८ प्रतिशतमा आत्महत्याको समस्या देखिएको अध्ययनकर्ताको भनाइ छ । यो अध्ययनबाट उनीहरुले अनिन्द्रा स्वास्थ्यका लागि धेरै हानिकारक हुने निष्कर्ष निस्किएको छ ।
सन् २०११ देखि २०१४ सम्म एक लाख १० हजार ४९६ जना सहभागीसँग सामेल भएर गरिएको अध्ययनका क्रममा अनिन्द्राबाट सबैभन्दा धेरै कलेज तहमा पढ्ने विद्यार्थी पीडित भएको पाइएको छ ।
धेरैजसो मानसिक कारणले निन्द्रा विथोलिन्छ ।
मनमा कुरा खेलाउने बानीले निन्द्र पर्दैन ।
धेरै सोच्ने, मनमै तर्क वितर्क गर्ने, कुण्ठा, गुनासा, आवेग जस्ता मानसिक विकारले निन्द्रा बिथोलिन्छ ।
शारीरिक समस्याले पनि निन्द्रा लाग्दैन ।
कमजोरी वा कुनै पीडाको कारण मस्त सुत्न सकिदैन ।
धेरै उत्साहित हुँदा, थाक्दा निन्द्रा लाग्दैन ।
यसरी पुगिन्छ गहिरो निन्द्रामा
निन्द्रा नलाग्दा केहिले औषधी सेवन गरेको पाइन्छ । यो राम्रो होइन । आफ्नो बानी नियमित गर्न सके गहिरो निन्द्रामा पुग्न सकिन्छ । त्यसका लागि केहि टिप्स यस्ता छन् :-
राती सुत्ने समयलाई नियमित गर्नुपर्छ । नियमित सुत्ने अभ्यासले ठीक समयमा निन्द्रा लाग्छ ।
सकेसम्म ८ देखि १० बजेसम्म ओछ्यानमा पुग्नुपर्छ । ओछ्यानमा पुगेपछि भिडियो हेर्ने, चर्को ध्वनी सुन्ने, फेसबुक चलाउने गर्नुहुँदैन । मधुरो आवाजमा सुमधुर गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।
मनलाई शान्त बनाउन कथा, उपन्यास, जीवनोपयोगी एवं धर्मको, दर्शनको पुस्तकहरु पढ्न सकिन्छ ।मनलाई अशान्त पार्ने हिसाब किताब गर्ने, योजना बनाउने, वितेका कुरा सम्झने, आफू अपमानति भएको कुरा सम्झनु हुँदैन ।
सुत्नुअघि हल्का व्यायाम गरेर १५ मिनेटजति ध्यान गरे राम्रो हुन्छ ।
राताे मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइँदै, काठमाडाैँ उपत्यकामा आज सार्वजनिक बिदा
तराईँमा मात्रै देखिने औलो हिमाली जिल्ला हुम्लासम्मै पुग्याे